Roobab Beero Badan Khasaare U Gaystay Oo Ka Da’ay Xariirad Iyo Habaas | Salaan Media
Boorame(SM)-Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degaanda Xariirad iyo Habaas ee Deg. Saylac ee Gobolka Awdal oo warqad qaylo dhaan ah soo gaadhsiiyay shabakada wararka ee Geestiir.com ayaa ku sheegay in roobab ka da’ay dhawaan degaankaasi ay qasaaro ba’an u gaysteen dhulbeereed aad u badan oo degaanadaasi ah.
Odayaashu waxa ay sheegeen in qasaarahu uu taabtay dadka beeralayda ah kadib markii ay fatahaadaha ka dhashay roobabkaasi xoogan burburiyeen dhul beereedkii, midhihiina ay jareen isla markaana ay qalabkii sida dhismayaashii lagu kaydin jiray midhaha dumiyeen iyagoo mishiinadii ceelasha saarnaa ee beeraha lagu waraabinayayna ay la tageen daadadkaasi.
Sidoo kale waxa ay odayaashu ka dayriyeenxaalada biyaha ee gudaha magaalada Xariirad oo ay xuseen in sedexdii maalmood ee u dambeeyay ay magaaladu tahay bilaa biyo. : “Roobabku waxa ka dhashay daadad badan, waxana ay daadadkaasi jabiyeen mishiinkii ceelka biyaha ee ay magaaladu ka cabaysay, waxana ay tani sababtay in magaaladu ay dhawr maalmood biyo la’aan hantido, waxana hubaal ah in 3dii maalmaad ee u dambaysay ay dadku cabayaan biyaha dooxa ee ay roobabku biyo dhigay, waxana aan ka cabsi qabnaa in ay ka dhashaan xanuuno mar hadii ay biyahaas la cabayaa yihiin kuwo aan nadiif ahayn.
Waxa kale oo ay warqadaasi ku xuseen odayaashu in maamul xumo ay ka jirto maamulka biyaha ee xariirada taasina ay sababtay in ay qalabkii biyuhu dayacmaan roobabkuna wax yeelaan.
Odayaasha baaqan diray waxa ay xukuumada, hayadaha caalamiga ah, kuwa maxaliga ah iyo dadka qurbo jooga ah ugu baaqeen in sida ugu dhaqso badan ay uga soo gurmadaan xaaladahaasi isku dhafan ee biyo la’aanta iyo burburka dalagii beeraha ee degaanadaas Xariirad iyo Habaas taabtay.
Odayaasha ku saxeexnaa warqadaasi baaqa iyo qaylo dhaanta ah dirayaa waxa ay kala yihiin:
1. Caaqil Cabdi Ciye Dharaar
2. Caaqil Xasan Xaashi Dharaar
3. Maygaag Daahir Bucul
4. Muumin Tukaale yabaal